Munaasabadaha Waxbarashada - Carewell SEIU 503
Taageerooyinka iyo waxbarashada ee dheefaha Carewell SEIU 503
Kahor COVID-19, qabanqaabiyeyaasha isdiiwaangelinta waxay u safreen Oregon oo dhan si ay ula kulmaan shaqaalaha daryeelka guriga iyo taageerada shaqsiyeed bixiya ee xaqa u leh. Hadafkeenu wuxuu ahaa inaan bixino waxbarasho ku saabsan dheefaha Carewell SEIU 503 oo aan uga jawaabno su’aalahaaga wadahadal fool ka fool ah. Xaaladda caafimaadka guud ee hadda jirta awgeed, kulamada qofka uu xaadiro ayaa la joojiyay ilaa ogeysiis dambe.
Waxaan rajeyneynaa inaan mar kale yeelano munaasabado qofka uu xaadiro mar haddii ay nabdoon tahay in sidaas la sameeyo. Dhanka kale, waxaan ku bixinaynaa munaasabadaha khadka Zoom si ay kaaga caawiso inaad wax badan ka ogaato dheefahaaga Carewell.
SIDA LOOGU BIIRO AQOON KORORSIGA ONLEENKA AH EE ZOOM?
Haddii aad wax dhib ah kala kulantid ku soo biirida aqoon kororsiga onleenka ah, fadlan soo wac 1-844-503-7348.
Taleefonka (maqal kaliya):
Garaac lambarka taleefonka ee Zoom oo geli lambarka Aqoonsiga zoom
Maskaxda ku haay in taleefon lambarada Zoom aysn ahayn kuwo bilaash lagu waco. Haddii aad isticmaasho lambarka la wacayo, adeeg biixiyaha taleefonkaaga ayaa kugu dalici doona khidmada sida wicitaanka taleefonka caadiga ah. Ka ogoow wax ku saabsan midan halkan.
Kumbuyuutar ama tablet ahaan:
Si aad u daawato sida loo gashto looguna isticmaalo Zoom kombuyuutarkaaga ama tablet-kaaga, tag halkan.
Haddii aad kolhoraba isku diiwaangelisay oo aad leedahay cinwaan iimayl:
Tag iimaylka xaqiijinta ee kaaga yimid Carewell oo guji xiriiriyaha aqoon kororsiga onleenka ah si aad ugu soo biirto
Haddii aadan isdiiwaangelinin ama aadan lahayn cinwaan iimayl:
Tag zoom.us, guji “Join A Meeting” (“Ku Biir Kulan”)
Geli lambarka Aqooonisha Kulanka
Guji badhanka “launch Zoom” (“Bilow Zoom”)
Taleefonka casriga ahaan:
Tallaabada 1: Xaqiiji inaad la soo degto app-ka Zoom ka hor inta aadan ku biirin aqoon kororsiga onleenka ah:
Si aad u daawato sida loo gashto looguna isticmaalo Zoom taleefankaaga casriga ah, tag halkan.
Haddii aad kolhoraba isku diiwaangelisay aqoon kororsiga onleenka ah oo aad leedahay cinwaan iimayl:
Haddii aadan is diiwaangelinin ama aadan lahayn akoonka cinwaan iimayl:
MAWDUUCYADA IYO JADWALKA SIMINAARADA SOO SOCDA
Munaasabo badan ayaa lagu bixin doonaa luuqada Isbaanish, Ruush, Fiyatnaamiis, Shiine, iyo Ingiriis. Si joogto ah dib ugu eeg boggan si aad u hesho macluumaadkii ugu dambeeyay! Dhanka bidix u soco markaad isticmaalayso taleefonada casriga ah si aad u aragto mawduucyada kale ee aan bixino.
Guudmarka Ilkaha, Araga + Maqalka, EAP
Warbixinada Dheefaha iyo Su'aalaha iyo Jawaabaha Bil'laha ah
Medicare iyo Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka 101
Yay tahay inuu ku soo biiro? — Dhamaan Shaqaalaha Daryeelka Guriga iyo Taageerada Shaqsiyeed
Maxay ku saaban tahay? —Xubnaha shaqaalaha Carewell ayaa dulmar ku samayn doona dheefahan aad xaqa u yeelan karto waxayna kaaga jawaabi karaan su’aalaha laga yaabo inaad qabto inta lagu jiro kulanka.
Jadwalka (Dhanka bidix u soco si aad ugu eegto taleefonka casriga ah)
Taariikh Waqtiga Luuqada Linkiga Diwaangelinta Taleefoon Lambarka ZOOM Aqoonsiga ZOOM
Arbaco, Luulyo 13 2-4 pm Ingiriis LINKIGA 1-346-248-7799 829 6544 3648
Maxay ku saaban tahay? — Carewell SEIU 503 Benefits kaliya kuma xadidino Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka, balse waxaan sidoo kale bixinaa Wakhtiiga Fasaxa Lacagta leh (PTO), Ilkaha, Aragga, iyo Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha. Isku diiwaangelin munaasabad waxbarasho si aad wax uga ogaato dhammaan dheefahan oo aad jawaab ugu hesho su’aalahaaga.
Khamiis, Luulyo 21 2-4 pm Ingiriis LINKIGA 1-346-248-7799 868 2429 6824
Yay tahay inuu ku soo biiro? —Shaqaalaha Daryeelka Guriga iyo Taageerada Shaqsiyeed, iyo xubnaha qoyskooda ee qorshaysanaya ama isku diyaarinayo inay iska diiwaangeliyaan Medicare ama kolhore iska diiwaangeliyay Medicare.
Maxay ku saaban tahay? —Kooxda Dheefaha ee Carewell iyo hay’addaha caymiska ee nala-hawlgalo, Valley Insurance Professionals, ayaa eegi doona waxyabaaha aasaasiga u ah Medicare iyo sida ka qaybgalayaasha xaqa u leh Medicare ay u isticmaali karaan dheefta Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka.
Jimce, Luulyo 1 10-11 am Ingiriis LINKIGA 1-346-248-7799 858 6273 2703